Akuko - Soybean fungicides: Ihe ikwesiri ima
Soybean fungicides: Ihe ikwesiri ima
Ekpebiri m ịnwale fungicides na soybean maka oge mbụ n'afọ a. Kedu ka m ga-esi mara ọgwụ ero iji nwalee, oleekwa mgbe m kwesịrị itinye ya? Olee otu m ga-esi mara ma ọ n’enye aka?
Otu ndị ndụmọdụ na-enye ndụmọdụ gbasara akụrụngwa Indiana na-aza ajụjụ a gụnyere Betsy Bower, Ceres Solutions, Lafayette; Jamie Bultemeier, agronomist, A&L Great Lakes Lab, Fort Wayne; na Andy Like, onye ọrụ ugbo na CCA, Vincennes.
Bower: Lelee ịhọrọ ngwaahịa fungicide na ụdị ọrụ agwakọta nke ga-agụnye opekata mpe triazole na strobiluron. Fọdụ na-agụnye ihe eji arụ ọrụ ọhụrụ SDHI. Họrọ onye nwere ezigbo ọrụ na ntụpọ frogeye.
E nwere oge soybean ogbo timings nke ọtụtụ mmadụ na-atụle. Oge nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya. Ọ bụrụ na m dị ọhụrụ n'iji soybean fungicide, m ga-eleba anya na R3 ogbo, mgbe pods malitere ịmalite. N'oge a, ị ga-enweta ezigbo mkpuchi na ọtụtụ nke epupụta na kanopi.
Ngwa R4 dị mma n'oge egwuregwu mana ọ nwere ike ịdị irè ma ọ bụrụ na anyị na-arịa ọrịa ala afọ. Maka onye na-eji ngwa ngwa fungicide nke oge mbụ, echere m na R2, okooko zuru oke, dị n'oge iji tinye fungicide.
Nanị ụzọ isi mara ma fungicide na-emeziwanye mkpụrụ bụ ịgụnye mpempe akwụkwọ na-enweghị ngwa n'ọhịa. Ejila ahịrị njedebe maka eriri ịlele gị, ma hụ na ị mere obosara nke eriri elele ma ọ dịkarịa ala nha nke isi nkwekọ ma ọ bụ mkpokọta gburugburu.
Mgbe ị na-ahọ ọgwụ na-egbu egbu, gbado anya na ngwaahịa ndị na-achịkwa njikwa ọrịa ndị ị zutere n'afọ ndị gara aga mgbe ị na-enyocha ala gị tupu na mgbe ọka jupụtara. Ọ bụrụ na ozi ahụ adịghị, chọọ ngwaahịa dịgasị iche iche na-enye ihe karịrị otu usoro ime ihe.
Bultemeier: Nnyocha na-egosi na nloghachi kasịnụ na ntinye ego maka otu ngwa fungicide na-esi na mbubreyo R2 ruo na ngwa R3 mbụ. Bido ịchọpụta soybean dịkarịa ala kwa izu na-amalite na oge ntoju. Gbado anya na ọrịa na ahụhụ na nrụgide yana uto ogbo iji hụ kacha fungicide ngwa oge. A na-ahụ R3 ​​mgbe enwere pọdata 3/16 nke anụ ọhịa na otu n’ime ọnụ anọ dị elu. Ọ bụrụ na ọrịa ndị dịka ọkpụ ọcha ma ọ bụ ntụpọ ahịhịa frogeye pụtara, ị ga-achọ ịgwọ tupu R3. Ọ bụrụ na ọgwụgwọ emee tupu R3, ngwa nke abụọ nwere ike ịdị mkpa n'oge emeju ọka. Ọ bụrụ na ị hụrụ nnukwu aphids soybean, stinkbugs, beet beetles or beetles Japanese, mgbakwunye nke ọgwụ ahụhụ na ngwa ahụ nwere ike ịdị mma.
Jide n'aka na ị ga-ahapụ nlele a na-adịghị edozi ka e wee jiri ya tụnyere mkpụrụ.
Nọgide na-enyocha ubi mgbe ị tinyechara akwụkwọ, na-elekwasị anya na esemokwu dị iche iche na nrụgide ọrịa n'etiti akụkụ ndị a na-emeso na ndị a na-agwọghị. Maka fungicides inye mkpụrụ abawanye, a ga-enwerịrị ọrịa na-adị ka ndị fungicide na-achịkwa. Tụlee mkpụrụ n'etiti akụkụ n'etiti ọgwụgwọ na enweghị ọgwụgwọ na ihe karịrị otu mpaghara n'ọhịa.
Dịka: Dịka, ihe eji egbu egbu na gburugburu R3 uto na-enye nsonaazụ kacha mma. Mara ọgwụ ero kachasị mma iji bido ọrịa nwere ike isi ike. Na m ahụmahụ, fungicides abụọ ụdịdị nke edinam na elu fim na frogeye akwukwo ntụpọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ebe ọ bụ na ọ bụ afọ mbụ gị na soybean fungicides, m ga-ahapụ ọnụọgụ ego ole na ole ma ọ bụ kewaa ubi iji chọpụta arụmọrụ nke ngwaahịa.